Nei veZvapupu zvaJehovha Vasingapinduri Zvese Zvese Zvavanopomerwa?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chol Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Faroese Finnish French Galician Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Javanese Kachin Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Tongan Turkish Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Nei veZvapupu zvaJehovha Vasingapinduri Zvese Zvese Zvavanopomerwa?
Zvapupu zvaJehovha zvinoteerera zvinotaurwa neBhaibheri parinoti hatifaniri kupindura zvese zvese zvinotaurwa nevanhu. Semuenzaniso, imwe vhesi inoti, “Munhu anoruramisa museki anozviunzira ruzvidzo.” (Zvirevo 9:7, 8; 26:4) Panzvimbo pekuitisana nharo nevanhu vanotaura zvinhu zvisiri zvechokwadi, chatinonyanya kukoshesa kufadza Mwari.​—Pisarema 119:69.
Asi panewo “nguva yokunyarara nenguva yokutaura.” (Muparidzi 3:7) Tinopindura zvinobvunzwa nevanhu vanoda kuziva chokwadi, asi hatiitisani nharo nevanhu vanenge vachingotsvaga zvekupikisa. Saka tinotevedzera zvakaitwa naJesu nevamwe vaKristu vepakutanga.
Jesu haana kupindura paaipomerwa zvenhema pamberi paPirato. (Mateu 27:11-14; 1 Petro 2:21-23) Haanawo kupindura paakanzi aiva chidhakwa uye aikara. Mabasa ake ndiwo aingotaura ega kuti aiva munhu akaita sei, uye izvi zvinoenderana nemashoko ake ekuti: “Uchenjeri hunoratidzwa kuti hwakarurama nemabasa ahwo.” (Mateu 11:19) Asi paaiona zvakakodzera, Jesu aipindura vanhu vaimushora asingapotereri.​—Mateu 15:1-3; Mako 3:22-30.
Jesu akaudza vateveri vake kuti vasaodzwa mwoyo nemashoko enhema avanopomerwa. Akati, “Munofara imi kana vanhu vachikuzvidzai nokukutambudzai nokukureverai zvenhema zvinhu zvakaipa zvemarudzi ose nokuda kwangu.” (Mateu 5:11, 12) Asi akataurawo kuti kana pakamuka mukana wekuparidza, aizozadzisa mashoko aakavimbisa ekuti, ‘Ndichakupai mashoko nouchenjeri, husingazokwanisi kudziviswa kana kupokanidzwa nevashori venyu vose vari pamwe chete.’—Ruka 21:12-15.
Muapostora Pauro akaudza vaKristu kuti vasaita nharo nevanhu vanenge vachingoda zvekupikisa, achiti izvozvo “hazvina zvazvinobatsira uye hazvina maturo.”​—Tito 3:9; VaRoma 16:17, 18.
Muapostora Petro akakurudzira vaKristu kuti vadzivirire kutenda kwavo pese panomuka mukana. (1 Petro 3:15) Asi akatiwo mabasa edu ndiwo anonyanya kuonekwa nevanhu kupfuura zvatinotaura. Akanyora kuti: ‘Nokuita zvakanaka munonyaradza kutaura kwokusaziva kwemapenzi.’​—1 Petro 2:12-15.